Basal metabolic zvazvingava karukureta
Basal metabolic zvazvingava karukureta anobvumira kuti iwe overenga zvazvingava rako basal metabolic, kuti ndiye uwandu macalorie kuti muviri wako unopisa apo ndakazorora ari neutrally unozvidzora zvakatipoteredza.
Kupinda mumuviri wako parameters kuverenga BMR
Sex: Mukono Chikadzi
Weight: kilogram pondo
Masendimita tsoka / masendimita
Basal metabolic zvazvingava (kana BMR) inhamba macalorie mungadai kupisa pazuva kana wanga basa uye akagara pamubhedha zuva rose uye simba rako chichange chete kushandiswa kuramba kwako zvinokosha zvomukati, izvo zvinosanganisira uropi, mwoyo, mapapu, tsinga, tsandanyama uye nezvimwe.
Change iwe mafuta zvidikanwi zuva kana uchida kurasikirwa uremu kana kuramba uremu yenyu.
Change ropa doro wevasungwa pamwero uye kuziva kana wako anogona kutyaira motokari nedzimwe ropa doro tigutsikane munyika dzakasiyana.
Muviri mafuta muzana Calculator
Change yenyu yakanaka uremu, muviri mafuta uye muviri mafuta muzana, uremu pasina mafuta, muviri chimiro mhando, basal kugayiwa kwezvokudya, uremu kugayiwa kwezvokudya uye nezvimwe.
Change uwandu macalorie pazuva unofanira kana uchida kuwana uremu hwako uye tsandanyama, kana kuti kuderedza uremu.